Glass Kanjera wokuisira
Tinoedza chaizvo, kugara kuvandudzika uye utsanzi, chaitwa kuti tive "mutengi ruvimbo" uye "sarudzo engineering michini nenhumbi muchiso yokutanga" bhizimisi. isu sarudza, vachidya takunda-zvisamumirira!
YIWU shuangbei girazi zvinogadzirwa kambani yakavambwa muna 2006, uye nyanzvi girazi kugadzira, girazi magadzirirwo nemagirazi kubudiswa kwemakore gumi. boka redu vanoomerera pfungwa kugadzirwa sainzi, kunyatsoteerera utariri uye rambai innovating, mumakore achangopfuura, izvozvo kwakasimbiswa kuva mumwe yakanakisisa magirazi makambani ari China. Company zvigadzirwa kwete chete vabudirire welcome kuti vatengi Asian uye Australia vatengi, asi kuvaka kwenguva refu pamwe nevamwe nemakambani muEurope uye American. Nokuda kwokuwedzera bhizimisi achangopfuura makore, kambani yedu vane kuvaka fekitari chitsva Shanxi uye Ivepo yemhando kugadzira uye kubudiswa equipments, isuwo kumisa basa design chikwata kuti zvimwe mabasa akadai applique, kuveza, pfapfaidzo ruvara, sandblasting, goridhe kuvandudza kukosha vatengi kuti chigadzirwa, ichi kuvaita zvakawanda yemakwikwi mumusika. Company zvigadzirwa zvinosanganisira chakagadzirwa zvigadzirwa akadai wakanwa mvura girazi, vhasi, girazi ndiro, muhadyana, chemwenje, waini nezvimwewo, uye nekuve muchina chivako zvigadzirwa: doro mukombe, mukombe duku, mukombe mvura, doro Mug, muhadyana, efodya, etc.
zvose kwedu zvigadzirwa kambani vane zvakaitika SGS, FDA, BV uye LFGB bvunzo, chose anogona nechokwadi vakachengeteka uye practicability kushandiswa. Tinovimbisa; tichashandisa rekutanga-kirasi unhu, basa rakaisvonaka, kushingaira kushandira pamwe, zviri achichinjana wako kuvimba kuvaka remangwana redu rakajeka pamwe chete. Yiwu shuangbei girazi zvinogadzirwa kambani iri nyanzvi kambani iyo nyanzvi mukugadzira magirazi zvigadzirwa, tine zvakakwana nesayenzi unhu Kwevadzidzi. Yiwu shuangbei girazi zvinogadzirwa kambani vane mukurumbira wakanaka China, inodziya shamwari kugamuchirwa zvinobva munyika yose kushanyira boka redu uye kuvaka mabhizimisi nesu.
Telephone: 0579-85011919 Fax nhamba: 0579-89940449
Ngatitange Kutaura ramunoda